ညဘက်Taxi စီးတဲ့မိန်းကလေးတွေအဲ့ဒိကားကိုသတိထားလို့ရအောင်ပါ - Tameelay
5.2.2018 ည 7:30 pm ကငှါးစီးလာတဲ့ taxi ပါ (6D-6932)မြောက်ဒဂုံ ဆက်သွယ်ရေး မှတ်တိုင်ကနေ ကုန်ပဒေသာ အတွင်းထဲဝင်ပေးပါဆိုပြီးငှားတာပါ ၂၅၀၀ တောင်းပါတယ်
များမှန်းသိပေမယ့် အထုပ်အပိုးတွေလည်းပါတာနဲ့ ငှားလိုက်ပါတယ် တစ်လမ်းလုံး မှောင်တဲ့လမ်းတွေချည်း ရွေးမောင်းပါတယ် ကိုယ်လည်းကြောက်လာတာနဲ့ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းဆီ ph ခေါ်တော့ မကြည်သလိုကြည့်ပါတယ်။
ပြီးတော့ကားကိုအရမ်းမောင်းပါတယ် လမ်းထိပ်ရောက်တော့ အဲ့လမ်းလေးချိုးလိုက်ရင် ရောက်ပါပြီဆိုတော့ စပြီးပြဿနာရှာတော့တာပါပဲ ‘နင်ငါ့ကိုလမ်းထိပ်အထိပဲ ငှားလာတာတဲ့’ ကိုယ်မှာလည်း မိန်းကလေးတစ်ယောက်ထဲ အထုပ်အပိုးတွေနဲ့မို့ အိမ်ရှေ့အထိရောက်ချင်လို့ taxi ငှားးစီးတာပါ
အတွင်းနည်းနည်းဝင်ရမယ် လို့လည်းပြောထားပါတယ် အဲ့တာကိုပြဿနာရှာတာပါ စကားပြောတော့လည်း မူးနေတဲ့ပုံစံနဲ့မို့ ကိုယ်လည်းမပြောချင်တော့တာနဲ့ ဦးလေးရပ်လိုက်ပါတော့ဆိုတော့ လမ်းထဲကိုအရမ်းချိုးဝင်ပါတယ်။
ကိုယ်လည်းတော်တော်လန့်နေပါပြီ ထပ်ရပ်ခိုင်းတော့မှ ရပ်ပေးပါတယ် ကားပေါ်ကအမြန်ဆင်းလိုက်တဲ့အထိ လူကိုမကျေမနပ်ပြောဆိုနေတုန်းပါပဲ
ကိုယ်လည်းလမ်းထိပ်ရောက်ပြီဆိုတော့ ကားပေါ်ကဆင်းကာရှိသေး ကားခကိုအော်ကြီးဟစ်ကျယ်တောင်းပါတယ် နောက်ခန်းထဲမှာတင်လာတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို အတင်းပစ်ချပါတယ်
တော်တော်လွန်လာတာနဲ့ ကျွန်မလည်း ကားခမရှင်းသေးပဲ အိမ်ကိုလှမ်း ph ဆက်ပြီးခေါ်တော့ အိမ်ကလူတွေရောက်လာတာတောင် လူမိုက်ပုံစံနဲ့ ရန်တွေ့နေတုန်းပါ
“ကျုပ်လည်းဒီနားမှာနေတာ ဘယ်တိုင်တိုင်ဂရုမစိုက်ဘူး”လို့ပြောပါတယ် ရဲစခန်းဖုန်းဆက်မယ်ဆိုတော့မှ ကားပေါ်တက်သွားတာပါ
အမူးပါးပါ တော်တော်လည်းရိုင်းပါတယ် ကိုယ်လည်းတော်တော့်ကို လန့်တာပါ လမ်းမှာသာပြဿနာတက်ရင် မတွေးရဲစရာပါ အိမ်ပြန်ရောက်လို့တော်သေးတယ် taxi စီးတဲ့မိန်းကလေးတွေသတိထားရအောင်ပါ
ကား no. တင်ပေးထားတယ် (6D – 6932)
ကောင်းကောင်းမွန်မွန် Taxi ဆရာတွေကိုတော့ အားနာမိပါတယ်ရှင်ဒါပေမယ့် ကိုယ်လည်း Taxi မစီးရဲတော့ပါ
5.2.2018 ည 7:30 pm ကငှါးစီးလာတဲ့ taxi ပါ (6D-6932)မွောကျဒဂုံ ဆကျသှယျရေး မှတျတိုငျကနေ ကုနျပဒသော အတှငျးထဲဝငျပေးပါဆိုပွီးငှားတာပါ ၂၅၀၀ တောငျးပါတယျ
မြားမှနျးသိပမေယျ့ အထုပျအပိုးတှလေညျးပါတာနဲ့ ငှားလိုကျပါတယျ တဈလမျးလုံး မှောငျတဲ့လမျးတှခေညျြး ရှေးမောငျးပါတယျ ကိုယျလညျးကွောကျလာတာနဲ့ ကိုယျ့သူငယျခငျြးဆီ ph ချေါတော့ မကွညျသလိုကွညျ့ပါတယျ။
ပွီးတော့ကားကိုအရမျးမောငျးပါတယျ လမျးထိပျရောကျတော့ အဲ့လမျးလေးခြိုးလိုကျရငျ ရောကျပါပွီဆိုတော့ စပွီးပွဿနာရှာတော့တာပါပဲ ‘နငျငါ့ကိုလမျးထိပျအထိပဲ ငှားလာတာတဲ့’ ကိုယျမှာလညျး မိနျးကလေးတဈယောကျထဲ အထုပျအပိုးတှနေဲ့မို့ အိမျရှအေ့ထိရောကျခငျြလို့ taxi ငှားးစီးတာပါ
အတှငျးနညျးနညျးဝငျရမယျ လို့လညျးပွောထားပါတယျ အဲ့တာကိုပွဿနာရှာတာပါ စကားပွောတော့လညျး မူးနတေဲ့ပုံစံနဲ့မို့ ကိုယျလညျးမပွောခငျြတော့တာနဲ့ ဦးလေးရပျလိုကျပါတော့ဆိုတော့ လမျးထဲကိုအရမျးခြိုးဝငျပါတယျ။
ကိုယျလညျးတျောတျောလနျ့နပေါပွီ ထပျရပျခိုငျးတော့မှ ရပျပေးပါတယျ ကားပျေါကအမွနျဆငျးလိုကျတဲ့အထိ လူကိုမကမြေနပျပွောဆိုနတေုနျးပါပဲ
ကိုယျလညျးလမျးထိပျရောကျပွီဆိုတော့ ကားပျေါကဆငျးကာရှိသေး ကားခကိုအျောကွီးဟဈကယျြတောငျးပါတယျ နောကျခနျးထဲမှာတငျလာတဲ့ ပစ်စညျးတှကေို အတငျးပဈခပြါတယျ
တျောတျောလှနျလာတာနဲ့ ကြှနျမလညျး ကားခမရှငျးသေးပဲ အိမျကိုလှမျး ph ဆကျပွီးချေါတော့ အိမျကလူတှရေောကျလာတာတောငျ လူမိုကျပုံစံနဲ့ ရနျတှနေ့တေုနျးပါ
“ကြုပျလညျးဒီနားမှာနတော ဘယျတိုငျတိုငျဂရုမစိုကျဘူး”လို့ပွောပါတယျ ရဲစခနျးဖုနျးဆကျမယျဆိုတော့မှ ကားပျေါတကျသှားတာပါ
အမူးပါးပါ တျောတျောလညျးရိုငျးပါတယျ ကိုယျလညျးတျောတေျာ့ကို လနျ့တာပါ လမျးမှာသာပွဿနာတကျရငျ မတှေးရဲစရာပါ အိမျပွနျရောကျလို့တျောသေးတယျ taxi စီးတဲ့မိနျးကလေးတှသေတိထားရအောငျပါ
ကား no. တငျပေးထားတယျ (6D – 6932)
ကောငျးကောငျးမှနျမှနျ Taxi ဆရာတှကေိုတော့ အားနာမိပါတယျရှငျဒါပမေယျ့ ကိုယျလညျး Taxi မစီးရဲတော့ပါ
ယနေ့ မြန်မာပလာဇာမှာ သိန်းပေါင်း ၈၀၀၀ တန်ဖိုးရှိတဲ့ ချစ်သူအတွက် မွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ စုံတွဲ(ရုပ်သံ)
ယနေ့ မြန်မာပလာဇာမှာ သိန်းပေါင်း ၈၀၀၀ တန်ဖိုးရှိတဲ့ ရိုးရွိုက်စ်ကို ချစ်သူအတွက် မွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ စုံတွဲ(ရုပ်သံ) ချစ်သူအတွက် မွေးနေ့လက်ဆောင်ကို သိန်း (8000) တန်ရှိုးရွက်စ် လက်ဆောင်ပေးတာ မြန်မာပလာဇာမှာ Credit – ရည်ကြို …
မိုးကုတ်​မြို့က​ထွက်​ခဲ့တဲ့ ထိပ်​တန်း ပတ္တမြားလေးလုံး
မြန်​မာပြည်​ရဲ့ ပတ္တမြား​မြေလို့တင်​စား​ခေါ်​ဝေါ်ကြတဲ့ မိုးကုတ်​မြို့က​ပေါ်ထွက်​ခဲ့တဲ့ ထိပ်​တန်းအမျိုးသမီး သရုပ်​​ဆောင်​​လေးဦး မြန်​မာရုပ်​ရှင်​​လောကရဲ့ ​အောင်​​မြေလို့​တောင်​တင်​စား​လောက်​ပါ​ပေတယ်​ ၄ယောက်​လုံးကလည်း အကယ်​ဒမီထူးချွန်​ဆုကိုယ်​စီနဲ့ပါ… ဝါရင့်​​တွေဖြစ်​တဲ့ ထက်​ထက်​နဲ့ မခိုင်​ကြီးတို့ကို​တော့ ​ဂျူနီယာ​တွေမမှီနိုင်​​သေးဘူး​နော်​။ ထက်​ထက်​ဆိုလည်း ထက်​ထက်​မိုးဦး​ခေတ်​ဆိုပြီး သပ်​သပ်​ကိုရှိခဲ့တာ။ မခိုင်​ကြီးဆိုလည်း ကျရာ​နေရာမှာပီပြင်​​အောင်​သရုပ်​​ဆောင်​နိုင်​တဲ့အပြင်​ သရုပ်​​ဆောင်​ Dialog ကအစအပို​တွေမ​ပြောဘူး။ အပြင်​မှာဖြစ်​​နေတာနဲ့အနီးစပ်​ဆုံးတူ​အောင်​လုပ်​နိုင်​တယ်​။ သူရီရင်​လိုက်​ရီရတယ်​ သူငိုရင်​လိုက်​ငိုရတယ်​… ဘယ်​သူ့ကိုအချစ်​ဆုံးလဲ? …
အကြောသေသွားတဲ့ခင်ပွန်းကို ကွာရှင်းပြီး ခင်ပွန်းရဲ့သူငယ်ချင်းနဲ့ လက်ထပ်ကာ ခင်ပွန်းဟောင်းကို အတူပြန်လည်ပြုစု
သတင်းခေါင်းစဉ်ဖတ်လိုက်တာနဲ့ အတော်လေးနားရှုပ်သွားနိုင်ပါတယ်။ တစ်ကယ်လဲ အတော်ထူးဆန်းတဲ့ သုံးပွင့်ဆိုင် မေတ္တာဘွဲ့ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ တရုပ်နိုင်ငံက အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ အကြောသေသွားတဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူကို ကွာရှင်းပြီး ခင်ပွန်းသည်ရဲ့ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းနဲ့ လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်၊ ဒီထက်ပိုပြီး အံ့သြစရာကောင်းတာက သူတို့အားလုံး တစ်အိမ်ထဲမှာပဲ အတူနေကြပြီး အကြောသေနေတဲ့ ခင်ပွန်းဟောင်းကို အတူတစ်ကွ ပြန်လည်ပြုစုကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Xu Xihan …